DHMİ 2019 Sannadkii Noofambar Hawada, Rakaabka iyo Gaadiidka Xamuulka ah ayaa dhawaaqay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDHMİ 2019 Sannadkii Noofambar Hawada, Rakaabka iyo Gaadiidka Xamuulka ayaa Ogeysiiyay
06 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, TURKEY
dhmi sanadka november rakaabka rakaabka iyo taraafikada xamuulka ayaa shaaca ka qaaday
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMI), 2019 bishii Nofembar ee duulista diyaaradaha, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka ayaa shaaca laga qaaday.
Sidaas awgeed, Bishii Nofembar ee 2019;
Tirada duulimaadyada soo degaya iyo ka degaya madaarrada; 68.149 ee duullimaadyada gudaha iyo 45.941 duullimaadyada caalamiga ah. Wadarta guud ee taraafikada diyaaradaha ee loo adeegay waxay gaareen 152.325 oo leh xad dhaaf.
Bishan, Turkey u adeega gaadiidka rakaabka guriga garoomada diyaaradaha ee guud ahaan 7.957.237, gaadiidka rakaabka caalamiga ahaa 6.566.620. Sidaa daraadeed, wadarta guud ee rakaabka leh rakaabka safarka tooska ah ayaa la xaqiijiyey inuu yahay 14.535.560 bishii la sheegay.
Gawaarida xamuulka (xamuulka, boosta iyo boorsada) taraafikada; Ilaa Nofembar, tan oo ah tan 64.269 ee khadadka maxalliga ah iyo tan tan tan ee 243.172 ee khadadka caalamiga ah ayaa wadarta wadarta tan ee 307.441 tan.
Marka loo eego dib-u-cusboonaynta bil kasta ee 11 (Janaayo-Noofembar);
Duulista diyaaradda iyo qaadista gegooyinka diyaaradaha waxay noqotay 777.408 duullimaadyada gudaha iyo 669.761 duullimaadyada caalamiga ah. Sidaa darteed, wadarta guud ee diyaaradaha 1.885.567 waxaa lagu adeegsaday xad-dhaafyo.
Turkey 92.842.325 oo ka mid ah garoomada diyaaradaha gaadiidka rakaabka qoyska guud, halkaas oo 102.528.086 gaadiidka rakaabka caalamiga ah ee xilligan wada lacag si 195.618.392 rakaab ah transit toos ah la total gaadiidka rakaabka.
Xilliga su'aasha la raacayo, xamuulka (xamuulka, boosta iyo boorsada) taraafikada; 763.408 tan oo khadadka maxalliga ah iyo tan tan tan ee 2.395.847 tan ee khadadka caalamiga ah.
34.781 AIRCRAFT, 5.505.078 PASSENGER OO ADEEGYADA KA HELI KARA ISTANBUL AIRPORT
Bishii Nofembar, duulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee Istanbul iyo ka qaadista diyaaradaha waxay xNUMX u ahayd duullimaadyada gudaha iyo 8.709 duullimaadyada caalamiga ah.
Gaadiidka rakaabka wuxuu ahaa 1.359.920 duulimaadyada gudaha iyo 4.145.158 ee duulimaadyada caalamiga ah.
Kow iyo tobankii bilood (bishii Janaayo-Noofembar) muddadii ay jirtay, diyaaradda 295.163 iyo gaadiidka rakaabka ee 47.297.757 ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Istanbul.
Muddadii kow iyo tobnaad ee 2019, waxaa garoomada xNUMX garoomada diyaaradaha ee Istanbul Atatürk Airport, halkaas oo hawlihii duulimaadyada guud iyo rarkii xamuulku ay sii wateen.
Markaa, isku-darka wada duullimaadyada diyaaradaha ee 430.800 ayaa lagu ogaaday labadan garoon diyaaradeed isla muddadaas; Rakaabka 63.370.291 ayaa loo adeegay.
Mashruuc si loo yareeyo gaadiidka xamuulka
DHMİ 2019 Sanadka November xogta
Duulimaadyada duulimaadka diyaaradaha